TiVo vs Comcast, Ònye-enweta nkwanye DVR Agha?
USB, satellite, n'elu ikuku na agbasa ozi n'ikuku, nkwanye internet video - mgbe n'ihu nwere anyị nwere ọtụtụ nhọrọ nke otú e si enweta telivishọn mmemme. DVR, PVR, kọmputa ike mbanye, mpụga nchekwa na ngwaọrụ; ugbu a anyị nwere nhọrọ ndị dị otú na-echekwa omume maka ị na-elele mgbe e mesịrị tụlee ka ọma. Ya mere, ihe bụ eziokwu na ihe bụ mama mgbe ọ na-abịa ihe bụ ihe ndị kasị mma ngwaọrụ? Ka bee azụ n'ígwé ma anya na ọmụma.
Mbụ, gịnị bụ a DVR? A DVR, ma ọ bụ dijitalụ video edekọ, bụ a na ngwaọrụ na dere video si a isi iyi nke playback n'oge ọzọ. Ọ na-abịa na a na telivishọn omume ndu gụnyere otú i nwere ike mfe ịchọta-egosi na ị chọrọ ka ịdekọ. Kasị DVRs abịa na nnukwu ikike ike draịva, bụ ezie na ụfọdụ nwere flash ebe nchekwa kaadị dị ka ha nchekwa ọkara. E nwere a dịgasị iche iche nke ụdị na mbio obere nchekwa ikike na abụọ tuners, ruo site na ọtụtụ tuners na oke ike mbanye nchekwa ike. Ị nwekwara ike kwụsịtụ ma weghachi ndụ TV, nke bụ oké mgbe ị chọrọ ike gị egwuregwu nzi replays. Kasị DVRs-ekwe ka ị na-ekiri otu usoro ihe omume na e mbụ dere mgbe abụọ ndị ọzọ na-ndekọ, bụ ezie na ụfọdụ nwere ukwuu ike.
A TiVo bụ a gbasoo otu ụdị DVR na akpa ẹkenam 1999. Ọ na-achọ a na ndenye aha ka ya mmemme ndu na ike zụrụ ọnwa, ma ọ bụ dị ka a "ndụ" na ndenye aha (na pụtara ndụ nke TiVo, ọ bụghị gị ndụ, site na ụzọ). TiVos, dị ka USB ụlọ ọrụ DVRs, ike idekọ nanị otu show ma ọ bụ ihe dum oge. TiVos nwere smart mma nke na-ahụ nke na-egosi na ị na-ekiri ma na-atụ aro yiri ndị gị dabeere na otú ị dịruru ugbu a mmemme. Ọ na-eji ndị a Fim na-atụ aro na-egosi ndị ọzọ na-ekiri.
Ka anya na a ole na ole nke isi atụmatụ nke ma otú i nwere ike ime a tụnyere. Anyị ga-ele anya na ise ihe.
1. efu dọwa vesos onwe
Na a Comcast DVR, ị na-renting ya site USB ụlọ ọrụ a na-eri nke $ 10 ka $ 16 a ọnwa, dabere na gị ahịa. E nweghị ndị na n'ihu-akwụ ụgwọ, na kwesịrị ngwaọrụ ada, i nwere ike gbanwee ya ọ na-eri na mpaghara gị Comcast ọrụ center. Ụfọdụ folks achọpụtala na ọhụrụ X1 igbe na-ewekarị mkpọka, nke mere na free gbanwee bụ kemfe.
A TiVo bụ nke gị na-dị ka ogologo oge ọ dịruru ma ọ bụ dị ka ogologo oge dị ka ị chọrọ ya, bụla bu ụzọ bịa. Ọ nwere ihe mbụ na-eri nke n'etiti $ 200 na $ 600, na-adabere nlereanya. Plus, i nwere na ndenye aha na-eri na n'elu nke unit price, nke bụ $ 15 a ọnwa ma ọ bụ $ 500 maka a "ndụ" na ndenye aha, nke TiVo nwere ike ma ọ na-enye gị ele mmadụ anya n'ihu otuto maka kwesịrị ngwaọrụ gị ada na gị mkpa onye ọhụrụ. Dị ka Comcast DVRs, ụfọdụ TiVo igbe bụ ihe na-erughị ike. Ọ bụ ọdịdị nke ngwá electronic. TiVos nwekwara mgbasa ozi n'elu ha, nke ụfọdụ Comcast ọwa eme Ọzọkwa, dị ka MusicChoice, ma ọ bụghị na ha nile.
2. Services dị
Na a DVR si Comcast, ị pụrụ nanị idekọ na-egosi na na-ohuru na otu n'ime Comcast si ọwa ma ọ bụ na-egwu na-egosi na na-kwajuru n'ime ya On enwe Ịnụrụ ngalaba. A TiVo nwere ike jikọọ a ọnụ ọgụgụ nke, gụnyere ihe ndị USB site a USB kaadị, na-ekwe ka ị ikpokọta niile nke gị ikiri isi mmalite n'ime otu igbe. Ọ ọbụna ejikọ a elu definition poolu.
The TiVo na USB kaadị nwere ohere nile nke USB On enwe Ịnụrụ ọrụ, n'ihi ya, na uche ya nwere ike dochie niile nke Comcast DVRs. Otú ọ dị, USB kaadị bụghị free. Ọ a na-agba $1.50 kwa kaadị kwa ọnwa, ruo $2.50 kwa kaadị na Frontier usoro.
The menus bụ ubé dị iche iche, dị ka ị pụrụ ịhụ n'okpuru.
TiVos makwa SD na HD dị ka nanị nsụgharị dị iche iche nke otu show, kama dị iche iche ọwa dị ka Comcast eme, otú ị nwere ike ịtọ gị DVR ka dị nnọọ ndekọ HD. Nke a na-eme ka ọ dịtụ ike dị nnọọ ndekọ HD on a TiVo.
Ala n'okporo ụzọ, Comcast na-eme atụmatụ na X2 usoro nke ga-ígwé ojii ndekọ ikike, si otú agwụcha mkpa maka a igbe n'ụlọ gị mgbe nile. TiVo bụghị ma mara ọkwa dị otú ahụ a atụmatụ.
3. Njikọ ka a netwọk
TiVos nwere ike jikọọ kọmputa dị n'ụlọ gị netwọk, na Kacha ọhụrụ otu onye, ​​bụ Roamio, abịa na wuru na-wifi, n'ihi na ngụkọta nnwere onwe nke iji. N'ihi na ọ bụ na netwọk, ị nwere ike enuba egosi na kọmputa gị site na TiVo igbe maka mgbe e mesịrị playback. Ọ na-akwado ọwa dị ka Netflix, Hulu Plus, na Amazon ngwa ngwa. I nwekwara ike enuba egosi gị Apple obere ngwaọrụ na mgbe ahụ na-egosi na gị na ụgbọelu ma ọ bụ mgbatị, ma ọ bụ iji ngwaọrụ dị ka a ime akara. (Android ngwaọrụ ga-nwere otu ikike anya.) The netwọk ikike pụtakwara i nwere ike iji kọmputa gị aka ịchịkwa TiVo igbe na-ele ọdịnaya n'ebe ọ bụla na ị bụ.
Ụfọdụ ndị nlebanye anya na-ahụ kwuru na netwọk melite bụghị dị mfe dị ka ọ pụrụ ịbụ, na ọ na-achọ ụfọdụ kọmputa ihe ọmụma na ikike. Ọ bụrụ na ị nwere tech onye dị nso, novice kọmputa ọrụ nwere ike ghara ịchọrọ melite netwọk.
The iPhone ngwa ime ihuenyo anya dị ka nke a:
A TiVo nwere adịghị ike nke onye nwere ike ịnweta nke ọwa. Ka ihe atụ, ọ na-adịghị enuba HBOGo ya, ọ dịghịkwa interface na Apple si TV mmemme. N'ihi na ị ka chọrọ onye AppleTV ngwaọrụ.
Comcast igbe nanị adịghị netwọk ọma. Ha na-e ka ohuru USB n'ókè site na gị TV, ma ọ bụghị na a n'ụlọ netwọk. Ha na-emekarị mfe jikọọ, Otú ọ dị, dị nnọọ ka a na a USB na igbe na-plugged n'ime TV.
4. ndekọ ikike
Ọhụrụ TiVo, na Roamio, nwere ọtụtụ dị ka isii tuners na ike idekọ n'otu oge na ruo awa 150 nke elu definition mmemme. Ị Aga mgbe nwere ọzọ usoro ihe omume esemokwu ọzọ!
TiVos nwere Ndekọ akọ na mbio 75 na 450 awa, na-adabere ma ọ bụ ọkọlọtọ definition ma ọ bụ elu definition, na nke ngwaọrụ ị na-eji. Ị nwere ike ịhọrọ si atọ ụdị nke Roamio. Ukot nlereanya efu $ 200 na nwere 75 awa nke ikike. The menu na atụmatụ ndị ọzọ mmachi na onye a karịa na ndị ọzọ. E nwere n'etiti nlereanya ọnụ na $ 400 nke nwere otu isii tuners ka elu-ọgwụgwụ onye ma nwere ike na-jide 150 awa nke na tepụ. Mgbe ahụ n'elu EBIONITISM nlereanya efu $ 600 na nwere 450 awa nke ndekọ ikike, ihe nile nke ọ na elu definition.
The Comcast X1 DVR nwere anọ tuners na ya nwere ike dekọọ ha n'out oge. Ị na-ekiri a prerecorded omume mgbe ọ na-Ndekọ, kwa. Ọ nwere ike ijide awa 120 HD ma ọ bụ 600 awa nke SD mmemme.
The Comcast X1 DVR usoro nwere olu-arụ ọrụ interface na a kpamkpam dị iche iche anya na okirikiri nhọrọ ukwuu karịa ha ọkọlọtọ usoro nwere.
Ihe bụ isi Comcast ime bụ a multi-ọrụ ime na ike nke ịchịkwa niile na ọrụ, ma ọ dịghị nwere ikike jikọọ a obere ngwaọrụ dị ka a mbadamba nkume ma ọ a smartphone nwere Njikọta na ụzọ dị ka a TiVo nwere ike site na ngwa. The ime nwere na-akara nke n'anya iji na-arụ ọrụ.
The TiVo ngwaọrụ menu bụ na ọkọlọtọ definition, maka ndị nwere nnukwu definition melite, i nwere ike ịhụ nke a a bit ndọpụ uche ma ọ bụ ajị ajị. Ọ dịghị abịa na ngwa ọdịnala n'ihi inyịme ihe igbe nwere ike ime, gụnyere egwuregwu maka ụmụaka.
Ọtụtụ ndị nlebanye anya mmasị interface na TiVo mma karịa okporo ji na Comcast ọrụ. The TiVo mmemme ndu-enye gị ohere ka ihichapụ ọwa ị na-adịghị na-ekiri otú ị na-achọ na ọwa-amasị gị. Comcast ji ndu-ekpuchi ọ bụla ọwa ha na-enye, ọbụna ndị na-adịghị dị na gị EBIONITISM nke ọrụ.
Na TiVo Roamio, ejikọta a mbadamba-enye gị ohere ka ọ na-ụlọ ọzọ ma ka na-arụ ọrụ na "ime" n'ihi na TiVo DVR. Download ngwa jidesie gị na ngwaọrụ ma ị na-na na njikere ịga.
TiVo si ngwaọrụ ime nwere sleek okirikiri nhọrọ ukwuu na-akpọ "ahụekere".
Ihe ọ-abịa ala na-achọ otú ị na-eji gị TV, ebe ị ga-esi gị isi mmalite si, na ihe gị ego bụ. Ọ bụla na ngwaọrụ nwere ya set nke ihe ndị na-adọrọ mmasị, na nke drawbacks. N'ihi mgbanwe nke ịbụ ike iji multiple na isi mmalite ngwaọrụ, TiVo bụ doro anya-eto eto. N'ihi na eri na n'ikpeazụ, ọ bụ ihe fọrọ nke nta a Olee. N'ihi na ala nke njikọ a TV, na Comcast igbe-abịa si n'elu. N'agbanyeghị nke otu ị bulie, ị ga-mgbe-agba ọsọ nke oké omume na-ekiri.
Best 10 Sites ka Download Music Video Free
Olee otú Download Rdio Music Mfe
Top 10 Popular Video Ịkekọrịta nrụọrụ Review
Download na tọghata ọ bụla Facebook Videos - bụghị nanị gị na enyi '
Olee otú iji tọghata na Ọkụ Movies ka DVD
Olee otú dezie WMV Files na WMV Editor na Mac / Windows
> Resource> Video> TiVo vs Comcast, Ònye-enweta nkwanye DVR Agha?